SIDA LOO ABUURO PEAR GUGA: TALLAABO TALLAABO LOOGU TALAGALAY BILOWGA AH - KU'SAABSAN
Tallaalka guga waa ugu dabiiciga ah ee isteroberi, inkasta oo la samayn karo waqtiyo kale. Iyada oo qaabkan, waxaad dib u soo noolaan kartaa geedka dhiman, saxi cilladaha taajka, hagaajiyo sifooyinka geedka iyo tayada miraha, iyo xataa keeno dhaqan cusub!
Diyaarinta guntinta tallaalka
Grafting for grafting waxaa la goostay ka hor wakhtiga, tan iyo dayrta. Waxaad sameyn kartaa tan guga, laakiin guluubka xilliga dayrta waxaa loo tixgeliyaa inuu yahay wax ka fiican, maadaama ay macquul tahay in laga sheego jarista guga haddii ay ka badbaaday dhaxan qaboobaha.
Shaqadu waxay noqon doontaa mid aan waxtar lahayn haddii qalabka loo yaqaan 'scion' uu dhaawac gaaray. Iyadoo sugayay dhamaadka caleen dayrta, joojinta socodka dheecaanka iyo gelidda geedaha galay wajiga nasashada, caleemaha sannadlaha ah ayaa la gooyaa.
Waad ku dari kartaa habkani xilliga guga. Laga soo bilaabo laamiyada yar yar ee la jarjarey gooyaa gooyn, kuwaas oo loo doorto for graft.
Waa muhiim! Wixii scion ma isticmaali qaybta hoose ee biqil - waxaa jira qolof ah oo adag oo socodka dheecaanku maaha mid aad u daran. Dusha sare sidoo kale waa in aan la qaadin - indhaheeda wali si buuxda looma horumarin. Qeyb dhexe oo dhexdhexaad ah ee dhexdhexaadiyaha laanta 5-6 mm iyo dherer 10-15 cm Qaadashada waxaa ku jira 3-4 burooyinkeeda oo si wanaagsan loo horumariyey, qaybta sare waxay ku taalaa kore kelyaha.
Iska yaree foomka gooyno xirmooyinka, xirxiran. Baakadaha waxaa lagu dhejiyaa weel ku jira ciid qoyan ama sida balka, iyo weelka - Maqsin.
Heerkulka kaydinta waa inuu noqdaa qiyaastii 2 ° C. Maqnaanshaha Maqsin, xidhmo xidhmo ah waxaa lagu kaydin karaa qaboojiyaha, khaanadda albaabka, ku duudduubtay maro qoyan iyo boorso cellophane ah.
Waqti ka waqti, maaddada waa in la kormeero, hubi nuxurka qoyaanka substrate oo qoyi sida loogu baahan yahay. Haddii gooynta lagu keydiyo qaboojiyaha, marka la diiriyo, waa in la daryeelaa oo loo wareejiyaa waqtigan meel leh heerkul ku habboon.
Ma taqaanaa? Ku'saabsan - Koonfurta Aasiyaanka ah. Kumanaan sano ka hor, waxay u yimaadeen Yurub, iyo qaarada Mareykanka - kaliya 4 sano ka hor.
Waa maxay dhirta dhirtu ka samaysan kartaa pear lagu beeray
Midka ugu dabiiciga ah wuxuu ku dheggan yahay jirida pear. on geed geed saytuunkoray jawiga.
Waa muhiim! Waxaa fiican inaad isticmaasho noocyo kala duwan oo dhaqameed sida "Severyanka", "Svetlyanka", "Tonkovetki." Gibriga loo yaqaan 'peary Ussuri' ayaa lahaan doona jiilaalka sare, si kastaba ha ahaatee, si uu u helo, waa inaad isku daydaa - Dhirta beeraha oo dhan si fiican uma qaadato saadkan.
Si kastaba ha noqotee, wax waliba waa mid aad u adag ama fudud, iyadoo ku xiran hadba sida aad u eegto. Waxaa jira xulashooyin kala duwan, oo ay ku jiraan kuwa caanka ah, oo leh caawimaad kaas oo aad ku dari kartid aqriska beertaada oo aad ka dhigeyso mid adag.
Maxay kale oo pear ku noqon karaa meeshoodii si ay fuush u qaadato xidid iyo midho dhir ah?
Xiddiga loo yaqaan "Grafting" waxaa loo tixgeliyaa habboon. isteroberi on pear-ciyaar ama geed-tufaax ah. Naxariistaan ​​doorashadani waa inaadan isticmaalin geed duurjoog ah oo diyaarsan - geedka ayaa ku noolaan doona muddo dheer mana midabkiisu ma kala duwanaan doono. Geedka asaasiga ah waa in lagu beeraa geedka laftiisa koray miraha duurjoogta ah, ka dibna geedka ayaa awoodi doona inuu si buuxda u kobciyo, wuxuu noolaan doonaa muddo dheer oo midho dhaadheer leh.
Iskalxi pear guga on geed geed tufaaxa ah - Noocyada noocyada: noocyada dhirta ee noocyada isku midka ah, waxay leeyihiin waqti isku mid ah. Iyada oo ikhtiyaarkan, natiijada si joogto ah u guuleysatay, taas oo caddaynaysa joogitaanka fidsan ee geedaha pear-tufaax ah ee beeraha ee breeders hiwaayadda.
Geedka quince Waxaa sidoo kale loo isticmaalaa kaydsi, laakiin waxaa jira waxyaabo gaar ah. Noqoshada warshad koonfurta ah, qosolkuna kuma duwan yahay caabbinta barafka gaarka ah. Fruiting sida hybrid ma noqon doono mid aad u dheer, laakiin waxay noqon doontaa hore. Geedku waa yar yahay, waxaa loo saari karaa dhinacyada wanaagsan ee tijaabooyinka la midka ah. Waa in lagu dhajiyo maskaxda in noocyo kala duwan oo pear yihiin ku xiran tahay quince.
Ma taqaanaa? Qoryaha moofaarku waa mid aad u adkeysan kara oo qaabka iyo muuqaalkiisa u hayaan qarniyo badan. Waxay ku habboon tahay soo saarida alaabta guriga leh, qalabka muusikada, awaamiir sare oo sareeya ee injineerada, suxuunta ka hor istaagi kara dhaqida mashiinka mashiinka.
Kuusku wuxuu dareemayaa wanaag on dogwood iyo Waxay siin doontaa midho fiican tayo leh. Labo nooc oo qoryo ah ayaa si fiican u kora.
Rowan maadaama saamiyada si fiican loo tixgelin karo, laakiin waxaa jira tiro muuqaal ah. Geedka dhoobada geedka ayaa si dhakhso ah uga dhaqso badan geedkii cagaaran, laanteeda qallajiyeyna waxay noqon doontaa mid qaro weyn oo dhowr sano ah marka la barbar dhigo jirkeeda. Tayada midhaha ayaa sidoo kale isbeddeleysa waqtiga, qaadashada qallajinta, acid, iyo raadinta qulqulka buuraha.
Sababtoo ah farqiga udubdhexaadka ah, dhibaatooyinka isku midka ah ayaa soo kordhi doona on irgu. Intaa waxaa dheer, rajada nolosha ee sida hybrid sida yar yar.
Aronia wuxuu siin doonaa isla dhibaatada leh farqiga gogolka, marka laga reebo noocyadda kaliya waxay heli doontaa ciriiri.
Waxaa laga yaabaa inaad xiiseyneyso akhrinta ku saabsan sabirta canabka.
Hababka iyo wakhtiyada tallaalka
Magaca guud ee loo yaqaan "grafting" micnaheedu waa kordhinta dhirta mid kale. Tiknoolojiyada kala duwan ayaa loo adeegsadaa tan.
Waxaa loo tixgeliyaa in ay tahay mid sax ah in lagu qallilo pear guga, tan iyo xilliga dayrta ee leh jilicsanaanta geed geedo ah ayaa fursad u ah inaysan degin sababtoo ah hargabka qaboobaha. Sababtoo ah caddaaladda, waxaa habboon in la ogaado in dayrta iyo xitaa tallaalka xagaaga ay si firfircoon u dhaqmaan by labada anfi iyo xirfadlayaal.
Ma taqaanaa? The pear Chinese - calaamad muujinaysa dhimashada dhimashada, malaha awooda alwaax. Si kastaba ha ahaatee, waxay sidoo kale tixgeliyaan midhihiisa calaamad muujinaysa kala go '. Giriigyada iyo Roomaanku waxay xayawaan ku sameeyeen miro khudrad si ay u siiyaan hadiyadaha jacaylka - Aphrodite iyo Venus, iyo sidoo kale guriga iyo hooyada - Hera iyo Juno.
Tiknoolajiyada loo doorto waqtiga tallaalka waa mid aad muhiim u ah:
Dareemista. Wajiista, hurdada ama isha toosan ayaa loo isticmaalaa. Waxaad geli kartaa guga iyo xagaaga, laga bilaabo May iyo dhamaadka bisha Sebtembar.
Cop cop. Guntinta dhirta ee dhexrooraha isku mid ah. Waxaa lagu dhaqmaa marka socodka dheecaanku uu bilaabmayo ama uu bilaabanayo, bisha Maarso ama Abriil.
Iska ilaali xagasha. Waxaa la samayn karaa dhexroor ka duwan ee scion iyo rootstock. Shuruudaha ayaa la mid ah sida lakala saaro.
Isku laabo dhinaca midigta. Waxaa loo adeegsadaa warshadaha khafiifka ah iyo kaydka waaweyn. Waxaa la qabtaa bisha Abriil ka hor wareegga miiritaanka.
Iska daba marin jilif. Qaabka ugu caansan ee loo isticmaalo, oo lagu sifeeyo sicir barar sare. Waxay macno u leedahay in ay adeegsato oo keliya marka dhaqdhaqaaqa casiirku uu bilaabmayo, bisha Abriil iyo Maajo.
By buundada Waxaa la isticmaalaa marka boogta loo baahan yahay in la bogsado - aan lahayn jilbaha meel ballaaran. Waxaa la qabtaa May iyo June, marka casiirku si firfircoon u wareego.
Isku-duwidda. Tiknooloojiyada isku xidhnaanshaha laba laamood oo isku xiga. Wax ku ool ah xilliga socodka firfircoonaanta laga bilaabo May ilaa Sebtembar ama Oktoobar
Baro wax badan oo ku saabsan noocyada kala duwan ee pear jilciya sida bacrimin 'dib u eegis sida "Xusuusta Yakovlev", "Duchess", "Moskvichka", "Just Maria", "Avgustovskaya dheen", "Veles".
Xilliga guga ee isteroberi ee jilicsan: waxbaridda talaabo tallaabo tallaabo ah
Inta badan, sababtoo ah fududeynta waxqabadka, isku-kalsoonaanta iyo heerka sare ee badbaadada, beeralayda iyo hiwaayadda labadaba waxay isticmaalaan habka loo yaqaano gooynta jilif. Ka fikir sida loo abuuro pear guga, tallaabo talaabo.
Qalabyo iyo qalab lagama maarmaan ah
Waa in la ogaadaa in habka qaboojinta loo bilaabi karo oo kaliya marka wax walba lagama maarmaanka la diyaariyo.
Waa muhiim! Nidaamka taxadar la'aanta ah ee ganacsiga xulashada waa mid aan xirfad lahayn. Waa wax aan la aqbali karin in la dayaco helitaanka qalabka iyo qalabka lagama maarmaanka ah, iyo sidoo kale tayadooda. Tani waxay joojin kartaa dadaalka oo dhan iyo bixinta natiijo xun ama aan ku qanacsaneyn.
Marka, waqtiga tallaalka talaalku bilaabmayo, waxaa lagama maarmaan ah in la helo:
jarista, la dhigo ama la gooyo iyadoo la raacayo xeerarka;
aad u fiiqan, iyo ka sii fiican - mindi udboodis ah;
ugu sarraysa oo khafiif ah oo jaban;
oo ku qallaji dabaqadda birta ah;
beerta beerta, balaastiig ama rinjiga saliidda;
qabsashada ama daboolida cajalad;
bacda balaastigga ah iyo labeen ama mootada.
Ka dib marka wax kasta la diyaariyo, sida qalabka qaliinka qalliinka ka hor, waxaad ku sii wadi kartaa nidaamka.
Maalin ka hor tallaalka, gooyn waa in la geeyaa qolka, ka dibna ku qoyso nus saac gudaheeda Epin ama kiciyaha kale, ama biyo yar. Xasuuso in mid kasta oo ka mid ah ay tahay inuu leeyahay 3 ama 4 oo kudhiib ah.
Hal ama kabadan banaan waa in la hubiyaa sahlanaanta kala soocida qoryaha. Xidid kasta oo isku xiran oo leh kaydka, gooyo yar yar (25-30 °) waxaa la sameeyaa qoryaha, kaas oo ah in lagu nadiifiyo mindi fiiqan si dusha sare ah. Qeybta sarre ee sare waa in la cusboonaysiiyaa.
On stock, waa inaad si taxadar leh u baaro meesha tallaalka la soo jeediyey. Xayawaanka waa in ay ahaato mid caafimaad qaba, iyada oo aan waxyeello lahayn. Heerka saamigu waa 3.5 cm.
Iska yaree qaybta sare ee jirkeeda, nadiifinta jajabka leh mindi fiiqan.
Si taxaddar leh u jilciya jilifada 4-5cm si ay lakabka sare si fudud u kala soocaan, iyo qoryaha ayaan waxyeello lahayn.
Si taxadar leh u riix jilifka mindi, ku rid cutir diyaar u ah si aad u aragto in 2-3mm ee gooyuhu aaney ku dhicin, si adag u cadaadi.
Si aad u leexiso isgoysyada iyo jarjarida qolka beerta, ku duub bogga ama cajaladda maqaarka si aad uhesho mid aan kala go 'lahayn.
Si adag u ilaali boorsada bustaha oo dhan: waxay ka ilaalin doontaa dabaysha iyo roobka waxayna ilaalineysaa heerka qiyaasta qoyaanka.
Waa muhiim! Waa in la ogaado in tallaalku uu yahay mid qalliin ah, oo nadiifinta waa in lagu hayaa. Waa mamnuuc in aad taabatid cutub cusub ama aad geliso gacmaha mashquulka ah. Haddii aad si kama 'ah uga tagto goynta, waxaad u baahan tahay inaad mar kale gooyso. Qashin kasta oo boodh ah ama gabal oo wasakh ah ayaa sababi karta mashiinka aan dhammeystirnayn.
Daryeel dheeraad ah oo tallaal ah
Labada todobaad ee soo socda waa in si joogto ah loo kontoroolaa. Waqtigaan waa ku filan marka la xoqdo iyo barar kelyaha.
Haddii tani aysan dhicin, waxaad isku dayi kartaa in aad qoyso meel kale oo geed ah, haddii ay jirto gooyn aan la isticmaalin, ama habab kale ku haboon waqtigii ku habboonaa.
Caleemaha daboolaya cuntada waa la kariyay, iyo sidoo kale caleemaha xannibaya iftiinka, waa in laga saaraa hab wakhti ah.
Iyada oo koritaanka firfircoon ee caleemaha qallajiyey, faashadda ayaa daciifisa si looga fogaado dhismaha caqabadaha, iyo dusha sare waa la jiidan yahay.
Xakamaynta waxaa la saaraa dhammaadka xilli ciyaareedka, dayrta, iyo ka sii fiican guga, ka dib dhirta kor maraya iyo barafka dhalaalaya.
Khaladaadka joogtada ah
In kasta oo xaqiiqda ah, iyadoo la raacayo tabobar habboon oo ku habboon, tallaalku ma aha hawl aan macquul ahayn xitaa bilawga, khaladaadka ay soo aragnay inuu bannaanka u dhigi karo:
qalabka wax lagu jajabiyo;
qalabka wasakhda ah;
oo ay ku jiraan waxyaabo kala duwan ama faashad adag;
codsi aan taxadar lahayn oo Vara ah oo la jarayo;
isticmaalka dhaxan-qaniinyo, gogol ama la qalajiyey;
ama aan qaan-gaadhin ama buro buuxda oo ku dul taal;
qaadashada geed geedka on dhagaxa iyo waliba dhinaca kale;
qaadashada noocyo dambe ee geedaha bislaaday hore iyo ka dib.
Horumarinta khudradda, geedisocodku waa geedi socod aad u muhiim ah kaas oo hadafyo badan oo la gaari karo: keena cusub ama ilaaliya noocyo dhif ah, sii dheereeya nolosha geedaha gaboobay, nabarrada bogsiiya, isbedelka iyo hagaajinta tayada miraha, iyo wax ka badan.
Kalluumeysiga pears guga waa habka caanka ah ee xirfadleyda, sidoo kale waa ku habboon yihiin bannaanka u soo jiidashada beerta iyo doonaya in ay ku guuleystaan ​​guul.